Nakaton’ny mpandrindra ny fifandraisan-davitra ao Bangladesh ny tranonkalan’ny oniversite mpamoaka injeniera ahitana tatitra fanararaotan’ny mpianatra zokiny · Global Voices teny Malagasy
Nitady sehatra amoahana ireo tantaram-pihoaram-pefy ny mpianatra
Voadika ny 14 Oktobra 2019 5:18 GMT
Nanozongozona an'i Bangladesh ny fihetsiketsehan'ny mpianatra manerana ny firenena taorian'ny fahafatesana mpianatra iray tao amin'ny Oniversite malaza iray ao Bangladesh momba ny maotera sy ny Teknolojia (BUET) izay maty nodarohan'ireo mpianatra namana ao amin'ny antokon'ny fitondrana, Awami League tamin'ny 7 Oktobra vao maraina. Nampibaribary ny fanararaotana ataon'ireo mpianatra eny amin'ny oniversitem-panjakana manerana ny firenena sy ny fikasana hanototra ny fiampangana ny famonoana an'i Abrar Fahad, 21 taona tao amin'ny efitranon'ny mpianatra ao BUET .
Taorian'ny famonoana, nivoaka ireo mpianatry BUET sy ny ivom-pampianarana hafa mba hitantara ny fanararaotana ataon'ireo mpianatra zokiny izay anisan'ny fomba fanao amin'ny fanenjehana na fandrahonana misy ambadika politika. Ny fanenjehana dia matetika antsoina hoe “fombafomba fanombohana” (batemy) nentin-drazana ampiharina eny amin'ireo ivom-pampianarana any amin'ireo firenena Aziatika Atsimo, izay ahitana ny fihoaram-pefy ataon'ireo mpianatra zokiny amin'ireo mpianatra zandriny.
Tamin'ny alarobia 9 Oktobra, nandidy ny fanakanana ny pejy an-tseraseran'ny BUET ny Vaomiera Mpandrindra ny Fifandraisandavitra ao Bangladesh (BTRC), satria nisy ny fitarainana miisa 175 mahery napetrak'ireo mpianatra taloha sy ankehitriny tsy mitonona anarana ao amin'ny oniversiten'ny injeniera (milina na motera) ambony ao amin'ny firenena izay mpianatra mendrika ihany no tafiditra ao aorian'ny fanadinam-panjakana hentitra dia hentitra.
Manasongadina mailaka tafaporitsaka, Dhaka Tribune mampahafantatra fa nangataka tamin'ireo mpandraharahan'ny International Internet Gateway (IIG) sy ny mpanome tolotra aterineto (FA-(fr) ao amin'ny firenena ny BTRC mba hanakana avy hatrany ny tranokala voalaza ao amin'ny tambajotra misy azy ireo. Tsy nisy antony nomena nahatonga io baiko io.
Ahitana rafitra fitateram-baovao antserasera tsy mitonona anarana eo ambanin'ny tranonkalan'ny departemantan'ny siansa informatika sy injeniera ao amin'ny BUET (CSE) izay anisan'ny fikarohana ao an-dakilasy ny pejy voasakana. Taorian'ny fanararaotana sy famonoana an'i Fahad, dia nitady sehatra hamoahana ny zava-iainan'izy ireo amin'ny fanararaotana sy ny isan'ny fitarainana tsy mitonona anarana napetraky ny mpianatra ankehitriny sy ny taloha tao amin'ny oniversite ireo mpianatra – izay momba ny herisetra sy ny fanararaotana ataon'ireo mpianatra zokiny mpikambana ao amin'ny Bangladesh Chhatra League (BCL), elatry ny mpianatra ao amin'ny antokon'ny fitondrana no ankamaroany. Nitatitra ny mpiserasera fa tsy afaka miditra ny pejy intsony izy ireo. Na izany aza, nozaraina tao amin'ny haino aman-jery sosialy ireo dika mitovy amin'ny fitarainana.
Araka ny filazan'ny BBC, mahazatra ao anatin'ny oniversitem-panjakana any Bangladesh ny fanararaotana sy fandrahonana noho ny fananana fomba fijery ara-politika tsy mitovy na fandavana ny baikon'ireo mpitarika.
Tamin'ny herintaona, nilaza tamin'ny tatitra iray ny Human Rights Watch fa ireo izay mamoaka lahatsoratra amin'ny haino aman-jery sosialy ka mitsikera ny governemanta no lasibatra hatrany any Bangladesh, ary matetika ampiasaina ny Lalànan'ny TIC Fizarana 57 mampiadi-hevitra.
Nidina an-dalambe ny mpianatry BUET sy ny hafa ao amin'ny firenena mba hanohitra ny famonoana.
Mpianatry EEE i Abrar, maty novonoin'ny mpianatra antokon'ny fitondrana BSL tao amin'ny efitranony.#JusticeForAbrar #Bangladesh
Rehefa avy nandinika ny rakitsarin'ny fakantsary fanaraha-maso avy ao amin'ny campus-n'ny Oniversite, nitazona mpianatra 13 noho ny famonoana an'i Fahad hatreto ny polisy, maro amin'izy ireo no mpikambana ao amin'ny Ligy Chhatra. Nametraka fitoriana olona miisa 19 momba ny raharaha famonoana ny zanany ny rain'i Fahad, Barkat Ullah.
Raki-tsarin'ny fakantsary fanaraha-maso ahitana ireo mpianatra mpitarika vitsivitsy namono ny mpianatry BUET antsoina hoe #AbrarFahad. Avy eo, nanipy ny vatana mangatsiaka tao amin'ny tohatry ny efitry ny mpianatra. Nametraka fitoriana mikasika ny raharaha ny rain'ilay maty
Nampanantena ny praiminisitra Sheikh Hasina fa hiharan'ny sazy ambony indrindra ilay mpamono ary tsy hisy hiala maina na inona na inona fironana ara-politika misy azy. Niaro ny sasantsasany tamin'ny fanapahan-kevitry ny roa tonta (Bangladesh sy India) nataon'ny fitondrana Bangladesh nandritra ny fitsidihany tany India vao haingana ihany koa izy, anisan'izany ny fizarana rano sy ny fanondranana entona LPG, izay notsikeran'i Fahad.
Nanontany tena ihany koa ny mpiserasera mikasika ny fanapahan-kevitry ny BUET hanokatra ny rafitra fitarainana saropady ho an'ny besinimaro izay mety hampidi-doza ny mpitaraina. Afaka manafina mora foana tsy voatery handohalika amin'ny manampahefana mpandrindra aterineto ny mpandrindra ny rafitra famenoan-taratasy ao amin'ny BUET. Tamin'ny fotoana nanoratana, dia tsy azo nidirana ny tranonkalan'ny BUET manontolo.